ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း - Didlink Group Co. , Ltd.
DIDLINK GROUP သည် ၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင်တရုတ်နိုင်ငံရှိရေနံတွင်း၊ ဓာတုဗေဒ၊ ရေကြောင်းအဆို့ရှင်ကုမ္ပဏီတွင်ပါ ၀ င်သောပညာရှင်ဖြစ်သည်။
တည်ထောင်ချိန် မှစ၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကိုယူနိုက်တက်စတိတ်၊ ဥရောပ၊ ရုရှား၊ CIS၊ တောင်အမေရိက၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်း၊ အရှေ့တောင်အာရှ၊ အာဖရိကသို့တင်ပို့သည်။
ဂိတ် valves များ၊ Butterfly အဆို့ရှင်များ၊ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအဆို့ရှင်များ၊ Check Valves များ၊ Ball valves များ, Plug Valves များ၊
အဆိုပါပစ္စည်းများပါဝင်သည်: Carbon Steel, Staninless Steel, Brass ETC.
ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံများတွင် ISO9001, CE, API, EAC, ETC.
DIDLINK GROUP သည်ထုတ်လုပ်မှု၏တိကျမှုနှင့်ခဲဖွယ်ကောင်းမှုကိုရှာဖွေသည်။ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစီအပါအဝင်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ပိန်ကြုံသောထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများကိုစဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များကိုသေချာစေရန်ဂရုတစိုက်ထုတ်လုပ်သည့်စံနှုန်းများနှင့်အညီတိတိကျကျလိုက်နာပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အကြီးစားမြင့်မားသောတိကျမှန်ကန်သောစီအင်စီစက်စက်များအမြောက်အများကို ၀ ယ်ခဲ့သည်။ အလိုအလျောက်ပြုပြင်သည့်ပစ္စည်းကိရိယာနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်စီမံခန့်ခွဲမှုတစ်ခုလုံးသည်ကုန်ပစ္စည်းများ၏ထုတ်လုပ်မှုတိကျမှုနှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်ကိုများစွာတိုးတက်စေပြီးထုတ်ကုန်များ၏ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကိုသေချာစေသည်။
၀ ယ်ယူထားသောအစိတ်အပိုင်းများ၊ အစိတ်အပိုင်းများသို့မဟုတ်ကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်သည့်ပစ္စည်းများဖြစ်ပါစေကျွန်ုပ်တို့သည်ကုန်ပစ္စည်းထိန်းချုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်၏စံနစ်အတိုင်းတိကျစွာလိုက်နာပါသည်။ ထို့ကြောင့်ကုန်ပစ္စည်းများ၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အရည်အသွေးကိုဆုံးရှုံးမှုမရှိစေဘဲဖောက်သည်များကိုမည်သည့်အခါကမျှစိုးရိမ်ပူပန်မှုမရှိစေပါ။ ERP၊ MES ကိုထိရောက်စွာထိန်းချုပ်မှုမှတဆင့် နှင့် Bar Code စနစ်, အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှု၏စဉ်ဆက်မပြတ် optimization အောင်မြင်ရန်ခြေရာခံနိုင်သောအဆို့ရှင်၏အစိတ်အပိုင်းအားလုံး၏ထုတ်လုပ်မှု, အပြောင်းအလဲနဲ့စမ်းသပ်ခြင်း။
အလွိုင်းသံမဏိဘောလုံးအဆို့ရှင်, ကြေး Ball ကိုအဆို့ရှင်, သံမဏိဘောလုံးအဆို့ရှင်, သန့်ရှင်းသောသံမဏိဘောလုံးအဆို့ရှင်, Ptfe ထိုင်ခုံများနှင့်အတူကြေး Ball ကို Valve, သံမဏိဘောလုံးအဆို့ရှင်,